Kedu ihe bụ Ota Ward JHS Wind Orchestra?
Ota Ward JHS (= Junmụ akwụkwọ sekọndrị nke Junior) Wind Orchestra bụ ọrụ nkwado nka maka obere obere klọb ọla nwere nsogbu na ịchekwa ndị otu na ntuziaka ndị ọkachamara maka ebumnuche nke ịkwado mmemme agụmakwụkwọ ndị ọzọ nke obere ụlọ akwụkwọ sekọndrị na Ota Ward. .Emebere ya kemgbe 29, nke Ota Ward Board of Education na-akwado.
Ndị sonyere na solo nke otu obere ndị ihe ruru mmadụ iri abụọ nọ na ụlọ akwụkwọ ahụ na nkwonkwo nkwonkwo nke ụmụ akwụkwọ nke ngalaba junior high school brass band na-anakọta, ndị na-eduzi ụlọ akwụkwọ solo arụmọrụ solo na-agwa onye nduzi ka ọ gaa Participlọ akwụkwọ ahụ Ndị sonyere ga-eme nkwonkwo nkwonkwo n'okpuru nduzi nke ndị oti egwu ọkachamara.A ga-ekwuputa nsonaazụ omume ahụ na Machị na "Spring Wind Concert" yana arụmọrụ solo dị ka akụkụ nke mbụ yana nkwonkwo nkwonkwo dịka akụkụ nke abụọ na Halllọ Nzukọ Ota Ward Citizen na Halllọ Nzukọ Aprico Large.
Ota Ward JHS Wind Orchestra Isi
Onye nduzi egwu / onye ndu
Amuru na Osaka.Amalitere ịme ihe mgbe ị gara Osaka College of Music.Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ gara Europe ma mụọ mba ọzọ na Mahadum Music na Perrụ Arts na Vienna.Gentledị nwayọọ ya na nnabata na nduzi ziri ezi emeela ka ọtụtụ ndị egwuregwu na ndị na-ege ntị jiri ịnụ ọkụ n'obi kwado ya.
Emepụtara "vidiyo vidiyo" nke ụlọ akwụkwọ ndị sonyere na afọ mbụ nke Reiwa ma wepụta ya na YouTube gọọmentị nke mkpakọrịta!
N'ime afọ mbụ nke Reiwa, anyị na-emekọ ihe ọnụ kemgbe Septemba, na-achọ "Concert Spring Wind" a ga-eme na Machị nke afọ XNUMX nke Reiwa.Ya mere, iji ebido ahụmịhe arụmọrụ na mma agha corona na ịghọta "igwu egwu" n'enweghị nsogbu ọ bụla, anyị gwara ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ndị sonyere n'afọ mbụ nke Reiwa ka ha sonye na klọb bras. ihe ngosi vidiyo nke ama ama ama ama ama "Treasure Island".A na-ekesa ya na ọwa YouTube anyị.Biko lee anya.